Abakhenkethi baseRussia bavaleleke eMzantsi Afrika emva kokuvalwa kwenqwelomoya entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo » Abakhenkethi baseRussia bavaleleke eMzantsi Afrika emva kokuvalwa kwenqwelomoya entsha
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinkampani zeenqwelomoya eziqhubeka nokubhabha zisuka eMzantsi Afrika zonyuse amaxabiso azo, ngenxa yemfuno emandla, ngelixa abathwali base-European Union besala ukukhwela kubemi abangengabo abe-EU.
Urhulumente waseRussia uye wavala iinqwelomoya ezisuka eMzantsi Afrika, eBotswana, eLesotho, eNamibia, eZimbabwe, eMozambique, eMadagascar, eSwaziland, eTanzania naseHong Kong kwiveki ephelileyo, emva kokufunyanwa kolunye uhlobo olutsha lwe-COVID-19 Omicron.
Ukuza kuthi ga ngoku, kukholelwa ngokubanzi ukuba, uhlobo lwe-Omicron yekoronavirus isenokuba sele iziswe eRashiya ngabakhenkethi ababuya e-Egypt, ibango elikhanyelwa ngabasemagunyeni bezempilo baseRussia.
Okwangoku, amakhulukhulu abantu baseRashiya abeza kwiholide baye bavaleleka Mzantsi Afrika, ayikwazi ukubuyela ekhaya ngenxa yokuvalwa kweenqwelomoya eziphuma kulo mmandla.
Ngokwe-arhente yeendaba eqhutywa ngurhulumente waseRussia, bafikelela kwi-1,500 abemi baseRussia abasenokungena Mzantsi Afrika emva kokuba iMoscow imise ngequbuliso zonke iinqwelomoya zabakhweli ukuya nokusuka apho ngenxa yoloyiko olutsha lwe-COVID-19.
Ummeli-jikelele wase-Russia eKapa uthe uzama ukufumana ezinye iindlela zokufuduka kwabemi baseRashiya, mhlawumbi okubandakanya uncedo oluvela eYurophu kunye nezinye iinqwelomoya zangaphandle.
Ngokwejelo leTelegram ye-consulate, ukuya kuthi ga kwi-15 abantu baseRussia baya kukwazi ukubhabha bagoduke ngenqwelo moya nge-1 kaDisemba.
“Ngokolwazi lwakwangoko, inqwelomoya yokubuyela ekhaya ngenkxaso ye Airlines yaseTopiya iza kuqhutywa nge-3 kaDisemba kwindlela yaseKapa-eAddis Ababa ukuya eMoscow,” lo mmeli naye wacebisa. Ixabiso lenqwelomoya kule nqwelomoya yorhwebo iya kuxhomekeka kwinani labakhweli ababhukisiweyo.
Ngokutsho kweminye imithombo yeendaba, 'amashumi aliqela' abemi baseRussia kwezi ntsuku zidlulileyo baye bawushiya uMzantsi Afrika besiya kwamanye amazwe kwilizwekazi, apho banokuzama ukuqhubeka nohambo lwabo lokubuyela ekhaya.
Iinqwelomoya eziqhubeka nokubhabha ukusuka Mzantsi Afrika banyusile imali yokukhwela, ngenxa yemfuno emandla, ngelixa abathwali abasekwe kwi-European Union besala ukukhwela kubemi abangengabo abe-EU.